RASMI: Ciyaaryahankii kooxda Chelsea ee Kenedy oo ku biiray Watford – Gool FM
RASMI: Ciyaaryahankii kooxda Chelsea ee Kenedy oo ku biiray Watford
(Watford) 31 Agoosto 2016 – Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Chelsea Kenedy ayaa dhammaystiray hal xilli ciyaareed amaah ah oo uu ugu wareegay naadiga Watford ee Premier League.
Xiddiga xulka qaranka Brazil ayaa ku soo biiray Blues xagaagii la soo dhaafay, waxaana uu isku dar u saftay 20 kulan xilli ciyaareedkii hore oo ku jiro kulankii goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa Premier League kaddib markii uu 39 ilbiriqsi kaga dhaliyey Norwich.
“RASMI: Watford FC waxa ay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo saxiixa Kenedy, kaasoo hal xilli ciyaareed oo amaah ah uga yimid Chelsea FC” ayuu u dhignaa qoraal kooban oo ay Watford ku xaqiijisay saxiixa Kenedy.
Kenedy ayaa noqonaya isku dar ciyaaryahankii 27-aad ee amaah uga baxa Chelsea, waxaana ugu dambeeyey Loic Remy oo shalay amaah ugu dhaqaaqay kooxda Crystal Palace.
Live: Toos ula soco maalinta ugu dambeysa ee suuqa kala iibsiga (Deadline day)